Akụkọ - preventionzọ mgbochi nchara maka akụkụ igwe eji eme ntụ
Preventionzọ mgbochi nchara maka akụkụ nke ígwè nke nwere ntụ
Igwe eji eme ka uzo di iche iche di iche iche di iche iche, nke bu ihe omuma, ike nchekwa, enweghi mmetuta na okwesiri maka imeputa ihe di iche iche.N'ihi na ihe eji eme ka uzo di iche iche bu uzo di iche iche dika ihe ndi ozo, site na ịpị, sintering, machining, okpomọkụ ọgwụgwọ na ndị ọzọ na Filiks, otú ahụ ka ntụ metallurgy ngwaahịa ga nwere ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke oghere ...
Iron-dabeere ntụ ntụ metallurgy, Ningbo ntụ ntụ metallurgy
Fe dabeere powder metallurgy bụ ụdị oru oma metal akpụ usoro, nke bụ ihe onwunwe ịzọpụta, ike ịzọpụta, ọ dịghị mmetọ na kwesịrị ekwesị maka uka production.Because iron dabeere powder metallurgy akụkụ bụ metal ntụ ntụ dị ka akụrụngwa, site na ịpị akpụ, sintering, ịkwaa ígwè, ọgwụgwọ okpomọkụ na usoro ndị ọzọ wee bụrụ, yabụ ngwaahịa ndị na-emepụta ihe eji eme ihe ga-enwerịrị ọnụọgụ pore, n'ozuzu ha nwere 10% - 30% nke pores.Ọ bụrụ na e jiri ya na igwe nchara, ọ ga-adịkarị nchara. Ọzọ, Ningbo ntụ ntụ metallurgy na-emepụta igwe na-arụ ọrụ gearbox nke nwere ntụ ntụ - akụkụ synchronizer ezé dị ka ihe atụ, maka ịza azịza igwe nke dabere na ụzọ mgbochi nchara.
Ventionzọ Mgbochi nchara maka Production nke Synchronizer Tooth Hub Na-adabere na Powgwè Powder Metallurgy Parts:
1, iron powder rust mgbochi: n'ihi na ịzụta nke iron powder bụ a powdery siri ike ihe, a ga-enwe ọtụtụ pores n'etiti ígwè ntụ ntụ, dị ka n'ime mmiri ikuku, na a nnọọ obere oge ga-ajari na-eri nri, na-akpata Ya mere, ịzụta ígwè ntụ ntụ ka arụnyere n'ime akpa mkpuchi siri ike, n'otu oge ahụ a ga-agbakwunye ime ahụ na mkpịsị aka, mpụga na akwa akwa akpa akpa, na-ebuli elu.
2. Nchekwa ntụ ntụ: mgbe a na-echekwa ntụ ntụ na ụlọ nkwakọba ihe, ọ ga-abụrịrị na nke mbụ, nke mbụ .Iron ntụ ntụ na ngwakọta ahụ, dịka ịzụta nke nkwakọ ngwaahịa, juru na akpa akwa plastic maka kpamkpam kaa akara, iji gbochie ọxịdashọn nke igwe a gwakọtara agwakọta; Etinyere ya na pallets osisi, a na-ejikarị oge n'etiti ojiji n'ime ụbọchị 3.
3, ojiji nke iron powder ịpị usoro: na mmepụta usoro nke ịpị synchronizer nha nha ehihie, mbuaha ígwè ntụ ntụ ga-eji na-edu ndú. A naghị ekwe ka iwepụta ntụ ntụ niile n'otu oge n'ihi ọtụtụ ọrụ. A na-eji ma na-enweta ego nke ngbanwe ọ bụla, na ọnụọgụ agwakọta ígwè dị n'etiti usoro kwesịrị ịchịkwa ya.
4. Synchronizer nha ehiwe ịpị oghere nchekwa: Synchronizer nha hub ehi ịpị oghere, ala ike, mfe imebi, a ga-edozi nwayọọ, enịm ke plastic tray nke ntụgharị car.Sintered na-enwe oghere n'ime 48 awa, ike dịkwuo ego nke mpụga nkwakọ ngwaahịa nchebe, karịa oge, na ihe nkiri plastik ga-agbagharị agbagharị ụgbọ ala, ikpuchi, iji zere ikuku mmiri.
5, ezé ezé ezé ezé ezé, na-eji usoro nyocha mgbochi nchara dị iche iche: mgbe ị na-emegharị ihe, emela ihe na-egbochi nchara nchara, mechaa ntụ ntụ na-eme ka mmanụ na 30 # mmanụ; Mgbe ị gachara, ozugbo tinye na mmanụ F901. , gụchaa ntụ ntụ metallurgy ezé ehiwe na 30 # mmanụ; Nchikota oku, ya bụ itinye na WD40 mgbochi nchara mmanụ, na-emecha ntụ ntụ metallurgy ezé na 30 # mmanụ.
E webatara usoro a nke ụzọ mgbochi nchara nke igwe eji eme ka igwe dị. Chọta usoro nchara nchara dị mfe ma dị irè nke igwe na-eme ka akụkụ dị iche iche dị na ígwè, nke mere na na usoro mmepụta, belata ọnụ ahịa mgbochi nchara ma melite arụmọrụ mmepụta.